Loharanom-pahalalana ho an'ny tanora - The Reward Foundation, Fitiavana, firaisana ara-nofo ary ny Internet
Home Momba anao Loharano ho an'ny tanora
Eny, ara-dalàna tokoa ny tanora hahaliana ny firaisana, indrindra mandritra sy aorian'ny fahatanorana, fa ny karazana firaisana mipoitra amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia tsy natao hanampy anao hahita ny tena firaisana ara-nofo na mianatra momba ny fitiavana firaisana ara-nofo. Ny antony dia ny hanaitra ireo fihetseham-po mahery vaika ao aminao izay tianao ny hiverenanao bebe kokoa.
Ny sary vetaveta amin'ny Internet dia indostria ara-barotra mitentina an'arivony kilao. Misy ny fivarotana anao doka ary manangona fampahalalana momba anao izay azo amidy amin'ny orinasa hafa mba hahazoana tombony. Tsy misy izany raha ny tranonkala vetaveta maimaimpoana. Misy risika amin'ny fahasalamanao ara-tsaina sy ara-batana, fampivoarana fifandraisana, ny fanatontosana any am-pianarana ary ny fandraisana anjara amin'ny fanitsakitsahana olona.
Ny antony mahatonga ny firaisana ara-nofo dia voafetra ho an'ny ankizy, na iza na iza ambanin'ny taona 18 taona, tsy natao hanimba ny fahafinaretanao, fa hiarovana ny atidohanao amin'ny fotoan-tsarotra amin'ny fandrosoanao ara-nofo. Noho ny fanananao mora foana amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet, dia tsy midika izany fa tsy mampidi-doza na manampy be izany.
Voambolana amin'ny sary vetaveta
Inona no atao hoe iray amin'ireo tanora maro mifangaro amin'ny pôrnôgrafia? Ahoana ny fomba hialanao amin'ny pôrnôgrafia? Ity misy torohevitra vitsivitsy avy amin'ireo mpidoroka amin'ny laoniny Gabe Deem sy Jace Downey.
Gabe Deem dia niresaka momba ny fampiasana ny pôrnôgrafia sy ny fomba nahitany fa nanana olana tamin'io (1.06)
Gabe dia mandray antsika amin'ny tantara famerenany (1.15)
Jace downey tamin'ny resaka nifanaovana tamin'i Mary Sharpe. Ny dian'i Jace mankany amin'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia sy ny fiakarana (2.02)
Vokatry ny saina amin'ny pôrnôgrafia
The vokatry ny pôrnôgrafia matotra indrindra rehefa zatovo ianao. Mety hisy vokany eo aminao izany mandritra ny taona maro. Androany no andro tsara indrindra hianarana bebe kokoa ary hanombohana dia hanatsarana ny fiainanao tsy misy pôrnôgrafia!